Hub Loo Waday TPLF oo La Qabtay. | Hargeysa World~Herald
Hub Loo Waday TPLF oo La Qabtay.
UncategorizedHub Loo Waday TPLF oo La Qabtay.
Hub ayaa laga helay guriga shaqsi looga shakiyay in uu xidhiidh la leeyahay kooxda argagixisada ah ee TPLF.
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya hub laga helay guri uu degganaa nin looga shakisan yahay in uu xidhiidh la leeyahay kooxda argagixisada ah ee TPLF.
Sida ay ENA u sheegeen ilo-wareedyo, ciidamada ammaanku waxa ay gacanta ku dhigeen laba qori oo Kalashnikov ah oo ay ku jiraan 60 xabbo oo rasaas ah iyo laba bastoolad oo ay ku jiraan 20 xabbo oo rasaas ah, kaddib markii la baadhayay hoygeeda.
Sida xogta aan ku helayno waxaa sii xoogaystay xidhiidhda dad lagu tuhmayo in ay isku diyaarinayeen in ay ka qeyb-qaateen shirqoollada lagu khalkhal galinayo waddanka iyaga oo gacansaar la leh kooxda argagixisada ah ee TPLF iyo Shene.